मलेशियामा बैदेशिक रोजगारको अवसर, साथै ओभर टाईम, सेवा शुल्क फ्री तथा खान/बस्न सहित ! - jagritikhabar.com
मलेशियामा बैदेशिक रोजगारको अवसर, साथै ओभर टाईम, सेवा शुल्क फ्री तथा खान/बस्न सहित !
जेएसएन इन्टरनेशनल प्रा. लिमिटेडले कारखाना कार्यकर्ताको लागि एक पद प्रकाशित गरेको छ। मलेसिया तपाईको रोजगारीको ठाउँ हुनेछ। यस कम्पनीमा एउटा पद रिक्त छ, LT। नम्बर 229664. TEAT LENG INDUSTRIAL SDN कम्पनीको नाम हो। खुला पदहरूको कुल संख्या 20 छ। तपाईंको स्थिति अनुसार, तपाईं रु. सम्म कमाउन हकदार हुनुहुन्छ। 31,592 प्रति महिना। तपाईले दैनिक कम्तिमा आठ घण्टा र हप्ताको छ दिन काम गर्नु आवश्यक छ। तपाईको रोजगारी सम्झौता २ वर्षको लागि रहन्छ।
आवेदकहरूले नेपालमा उनीहरूको चिकित्सा उपचार र बीमा सम्बन्धी सबै खर्चहरू कभर गर्न जिम्मेवार हुनेछन्। साथै, मेडिकल र बीमा कभरेज सहित विदेशमा भएको कम्पनीको सबै खर्चहरू प्रतिपूर्ति गरिनेछ। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकट प्रदान गर्नेछौं। सेवा शुल्क नि:शुल्क हुनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा LT जानकारी जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्।
कृपया भर्ती एजेन्सी र विदेशी कम्पनीको स्थिति र इतिहास फेला पार्नुहोस्। तपाईले गुगलमा सरल खोजी गरेर थप विवरण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले एसएमएस पठाएर पनि थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया LT [SPACE] LT_NUMBER टाइप गर्नुहोस् र 34001 मा पठाउनुहोस्।
वैदेशिक रोजगार विभागको महत्वपूर्ण सूचना:
आफ्नो नाममा भिसा पाएपछि मात्र रोजगार कार्यालयमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्। रसिद लिन नबिर्सनुहोस्। कामको लागि जाने योजनामा ​​रहेको देशको नेपाली कूटनीतिक कार्यालयको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना उपलब्ध गराइदिनुहोला। तपाईंले विदेशमा कुनै पनि समस्यामा पर्दा यसले मद्दत गर्नेछ।
कृपया कसैलाई अतिरिक्त पैसा नदिनुहोस्, यो विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको सही रकम मात्र तिर्नुहोस्। कुनै पनि विदेशी देशमा जानु अघि, तपाइँसँग अभिमुखीकरण वा इन्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनुपर्छ।
रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि देश, कम्पनी, उपलब्ध गराइने सुविधा र अन्य अवस्थाबारे निश्चित गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। त्यसको प्रतिलिपि आफूसँग राख्न नबिर्सनुहोस्।
बिदेश जाँदा नेपालको बिमानस्थल प्रयोग गर्नुहोस नत्र ठगी हुन सक्छ । यदि तपाईलाई यो जागिरको विज्ञापनको बारेमा थप विवरण चाहिन्छ भने, कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचल, नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोस्।